DUBAI: Muenzaniso weKubudirira | Mabasa - Basa - Kufamba Kubva kuZero kuenda kuHero!
Inspirational Quotes naSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Mabasa neAetna International
Zvakaoma kutenda uye kufadza kuti Dubai yakaenda
Credit: Mifananidzo ye Dubai muZ1960s uye 1970s kuratidza guta seGwenga rekukura: The Clocktower roundly in the neighborhood of Deira imire zvakapoteredzwa nejecha ...
Kunzvimbo Ino Inoshamisa
Uye ichiri kushandura, zuva rega roga kune shanduko itsva munzvimbo dzakapoteredza. Ichi chipurovhinzi cheUnited Emirates iyi muenzaniso wakajeka wezvatinodanho kukura. Nyika yose yakashamiswa zvakakwana kuti yakazadza sei, nzvimbo ine sandy uye yakasara yakazova iyo iyo nhasi. Pasina chero ruzivo uye teknolojia, guta iri rinoshandurwa kuburikidza nematambudziko akadaro uye kukunda avo vane mazai anobhururuka. Izvo zvinondipa chill apo pandinoedza kufungidzira kuti zvingava zvakaoma sei kuwana chimiro ichi kuti chave ikozvino muminda yose ingave ichichiita maitiro ake pachawo, kuvaka chikwata-class infrasture uye inotungamira teknolojia.
Nzvimbo iyi pakutanga inotsigirwa nehove uye pearl diving kwemakore ane chiuru, neyokutanga marekete eguta riri kuitwa mu1799 apo mhuri yeBani Yas yakasimbisa sekusununguka kwaAbrahama Dhabi.
Dubai yakave yakasiyana naShe mu1833 apo madzinza eAl-Maktoum akaitora iri norugare. Ukudengenyeka kukuru kwe1929 kwakakonzera kuparara mumusika wemisika yepasi rose, Sheikh Saeed achitsvaga imwe nzira yekuwana mari uye kukukoka Indian uye vatengesi voku Irani pano pasina kubhadhara mitero. Nekuwanikwa kwemafuta mu1966, nyika yakashandura zvisingazivikanwi uye yakatungamirira kuDhaibha kuva iyo ine simba, yezuva ranhasi, yebhizimisi inowanikwa muguta. Kwete, chero imwe nyika ingadai yakambofunga kuti kana kamwe guta risina ruzivo reGulf richaita basa guru mumari yepasi rose.
Pari zvino, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum ndiye vamiririri weUnited Emirates uye mutongi weEmirate yeDhaibha uye dare rake revashumiri vari kushanda zvakasimba kuti varambe varipo uye vanoita kuti rive nesimba rakanaka nemazano ekukurukurirana uye hukama hwepasi pose.
Chibereko chakanaka chekuedza kwavo ndekugadzirwa kweExpPO 2020, ichagadzirirwa neDhailand iyo yakapiwa neThe Bureau International Exhibitions General Assembly muParis munaNovember 27, 2013. Iko Expo inotarisirwa kuwedzera yakawandisa yakawanda yeudhamu kuhupfumi hweA Dubai neUAE.
Iyi nyika ndeye uye ichaita semagetsi makuru kumusika wemari.